Tag: ekwentị | Martech Zone
Kedu ihe bụ njem kacha mma maka ekwentị, DSLR Camera, GoPro, ma ọ bụ Igwe okwu?
Tọzdee, Febụwarị 22, 2018 Douglas Karr
M ugbu a na-ebu ọtụtụ ọdịyo akụrụngwa na m zụrụ a azu paaki na wiil, m ozi akpa bụ nnọọ kwa arọ. Mgbe akpa m na-ọma-haziri ahazi, M ka na-amasị na-ibu arọ site enweghị ọtụtụ nke ọ bụla ụdị ngwaọrụ ma ọ bụ ngwa m na-eweta na m. Otu mbipụta bụ nchịkọta nke tripods m na-ebu. M nwere a obere desktọọpụ tripod, ọzọ na-agbanwe, na mgbe ọzọ na
Mkpa oku ekwentị dị na njem ndị ahịa
Otu n'ime njirimara anyị na-ebupụta na ndekọ ndekọ ụlọ ọrụ anyị bụ pịa ịkpọ. Na nso nso a, anyị goro onye enyemaka na-akwadoghị maka ụlọ ọrụ nke anyị. Ihe anyị matara nke ọma bụ na ụfọdụ atụmanya na azụmaahịa agaghị eme azụmahịa ọ gwụla ma ha nwere ike ịkpọ ekwentị ma kpọọ ahịa ahụ. Ewezuga nnweta, okwu ọzọ bụ naanị mma. Ọtụtụ mmadụ na-eji igwe mkpanaka iji nyocha ma chọta azụmaahịa ahụ
Gịnị bụ pipeline ahịa? Na azụmaahịa azụmaahịa (B2B) na azụmaahịa maka ndị ahịa (B2C) ụwa, ụlọ ọrụ azụmaahịa na-arụ ọrụ ịkọwa ọnụọgụ ndị ndu ha na-anwa ịtụgharị ugbu a n'ime ndị ahịa. Nke a na-enye ha amụma ma ha ga-emezu ebumnuche nke nzukọ a dịka ọ gbasara inweta nnabata na uru. Ọ na-enyekwa ngalaba ngalaba azụmaahịa n'echiche dị mkpa dị ka
Tọzdee, Disemba 11, 2012 Douglas Karr
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịbawanye ntụgharị site na 391% site na ịgbanwe otu ihe gbasara usoro ahịa gị? Leads360 achọtala ụzọ iji mee nke ahụ… site na mbenata oge ntụgharị ọ ga - ewe onye na - ere gị ịkpọtụrụ atụmanya ahụ. Ngwa ọrụ inye aka na-ebugharị ọnụego ntụgharị site n'ịhụ na usoro dị n'ọnọdụ ịkpọtụrụ ma mechie atụmanya gị mgbe ha dị njikere ịzụrụ! Nke a bụ infographic: Usoro ahịa nke na-eme ka ịtụgharị nweta Nweta